Thursday August 01, 2019 - 12:36:31 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Madaxweynaha dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah ugu dhawaaqay in uu iska celiyay Baasaboorkii Mareykanka oo uu heystay wax kabadan 30 sanadood.
Qoraal kasoo baxay madaxtooyada ayaa lagu sheegay in Farmaajo uu iska celiyay dhalashada dalka Mareykanka wixii maanta ka dambeeyana uu yahay muwaadin soomaali ah!.
Muxuu Farmaajo isaga celiyay Baasaboorka Mareykanka?.
Laba sano iyo sideed bilood Max'med Cabdullaahi Farmaajo wuxuu wajahayay cadaadis uga imaanayay Jinsiyadda Mareykanka ee uu heystay, labada sano iyo dhowrka bilood ee uu madaxweynaha ka yahay DF-ka Farmaajo waa ku adkaatay in uu booqasho ku tago Mareykanka sababa la xiriira cabsi uu ka qabay dacwado lagusoo oogo.
Dad farabadan oo kamid ah jaaliyadda Soomaalida Mareykanka ayaa ku hanjabay in ay madaxweynaha DF-ka dacwado kusoo oogayaan haddii uu cagta dhigo dalka Mareykanka taas oo keentay in uu ka baaqsado safar uu dhanka Mareykanka ku aado.
Sida ay sheegeen dadka yaqaan sharciga Mareykanka madaxweynaha Dowladda Federaalka wuxuu lakulmi lahaa maxkamadeyn haddii uu wadanka Mareykanka tagi lahaa isagoo sita Baasaboor American ah.
Dacwado dhowr ah ayaa loo heystaa Farmaajo waxaana kamid ah kufsi uu sideetameeyadii ka geystay Soomaaliya iyo dambiyo la xiriiro shacabka rayid ah oo ciidamadiisu ku xasuuqeen Koonfurta iyo bartamaha dalka tan iyo markii uu madaxweynaha noqday.
Tallaabadan uu maanta qaatay Farmaajo ayaa loo arkaa mid uu isaga khafiifinayo caqabadahii ka heystay dhanka Socdaalka, hadda kadib ayuu ka qeyb geli doonaa shirarka ka dhaca magaalooyinka waaweyn ee wadanka Mareykanka waxaana yaraanaysa cabsidii uu ka qabay in dacwado lagusoo ooga isagoo carriga Mareykanka jooga.
Farmaajo iyo Kheyre oo lagu eedeeyay in ay damacsanyihiin Waqti kororsi.